Si kastaba ha ahaatee, taas oo ah hab gaadiidka ugu fiican? at Save A tareenka, Annagu waxaannu nahay dabcan u janjeeraa dhinac iyo qabaa safarka tareenka in uu yahay by fog ka xoogbadan ah nooca gaadiidka! Akhriso hoosta si aad u ogaato waxa fiican oo aan ku quusinno boostadayada safarka tareenka iyo safarka diyaaradda.
safarka Air la og yahay in uu noqdo mid ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsaha badan si ay u gaaraan meesha aad u socoto, si kastaba ha ahaatee, tani waxaa la qaadan oo keliya duulimaadka laftiisa tixgelin. Ilaa intee ka hor cararkiinnu samayn aad leedahay si ay u yimaadaan si ay u soo gudbaan dheer jeeg-in iyo line ammaanka? Haddii aad ku hubisay boorso waa inaad sugtaa inaad tan ururiso markii aad timaaddo - tan oo waqti qaadata. Si ka duwan garoomada diyaaradaha, saldhigyada tareen ma jiraan jeeg-INS ama khadadka ammaanka, sidaa darteed uma baahnid inaad in ay saacadood saldhigga ka hor dhoofkii. Inta badan xarumaha waaweyn ee tareenka ku yaalaan xaq qalbiga magaalooyinka waxay u adeegi. Badanaa marka aad tareenka, waxaad si toos ah timaado meesha aad u socoto. Si kastaba ha ahaatee, adoo raacaya diyaarad, waxaad bixisaan oo laga yaabaa in saacadaha helitaanka iyo ka garoonka diyaaradaha.
Haddii aad bixisay ee fasal ganacsiga, sida caadiga ah aad meel la xadiday kursiga diyaarad. On tareen, aad u guurto karaa si xor ah oo dheeraad ah, oo waxaad yeelan doontaa legroom more agagaarka kuraasta aad. Inta lagu guda jiro cararkiinnu, waa inaad sugtaa calaamad suunka gaariga si dami ka yimid kursiga guurto. Si kastaba ha ahaatee, on tareen aad hoos u guurto hayirin, Boobka qaniinyo ama kafeega, iyo daawashada adduunka oo maraya. A tareen kortaan muuqaal dabiici ah xitaa waxay noqon kartaa fasax ah. Tareenada yurubiyanka badankood waxay sidoo kale bixiyaan WiFi bilaash ah - wax aan wali laga dhihi karin dhamaan diyaaradaha.
safarka tareenka ayaa sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si raaxo leh u safri la xayawaanka aad caabuday. xayawaanka badan oo aan ku habboonayn in safarka hawada ay sabab u tahay caafimaadka, da ', ama taran.
rakaabka on tareenada Yurub qaadan kartaa eeyaha, bisadaha, iyo kuwa kale xayawaanka yaryar iyaga iyo inta badan iyada oo aan kharash dheeraad ahi jirin!
Wixii macluumaad dheeraad ah, Raac Kaydso Tareenka Facebook, Account Instagram, iyo Twitter Akoonada.